Sabboonummaan dantaa Oromoo ni daangessaa?
Falmiin dhimma sabboonummaa Oromoo ni xiqqeessa jedhu moo'amnaan gara ni daangeessaatti ce'amee jira. Kunis sabbonummaan ummata keenya sadarkaa Oromiyaa bira dabree akka Itoophiyaafi Afrikaa akka hin yaadne daangeessa qabxii jedhutu ka'aa jira. Kunis yaada hanqina hubannaa theory fi seenaa sabboonummaa biyyootaafi ummata gargaraa keessatti calaqqisiisee qabaachuu dhaburraa dhufa.
Akkuma tibbana jechaa turre sabboonummaan yaadaafi miira ummata eenyummaa, aadaa, seenaafi rakkoo waloo qabu tokko waliin sochoosuun dantaa siyaas-diinagdeefi aadaa ofii ittiin galma ga'aniidha ( Ideology for mobilization of a collective). Haaluma kanaan sabboonummaan sadarkaa sadihitti saba takkaahuu biyya tokko fayyaduu danda'a. Kan duraa ummanni aadaan, afaan, eenyummaanifi diinagdeedhaan cunqurfame roorroo san jalaa bahuuf itti fayyadamuu danda'a (resistance nationalism). Kanaan sabboonummaa hiree murteeffannaa ( self determination) jechuunii dandeeny. Amala sabboonummaa kanaa bal'inaan waan mari'achaa turreef hedduu jechuun hin barbaachisu.
Kan lammaaffaa sabni tokko erga bilisummaa goonfatee booddee tokkummaa eegsisuuf, misoomatti ummata hamilchiisuuf, diina ofirraa eguuf kkf faaydaa guddaa kennuu danda’a. Kana jechuun sabbonummaan ideology siyaasaa qabsoo ( resistance nationalim) qofa osoo hin taane siyaasaa bulchiinsaa ( governance politics keessatti madda hamileefi miira ummata sochoosuu guddaa ta’ee fayyaduu danda’a.
Kan kan sadaffaa ummanni takkaahuu biyyi cunqursaa jalaa bahee walabummaa isaa goonfate tokko dantaa siyaasaafi diinagdee isaa daangaa ofii bira cehaa warra biraa biratti babal'ifachuu yoo barbaades sabboonummaatti fayyadamuu danda'a. Kanaan expansionist / Imperialistic nationalism jechuunii dandeenya. Fakkeenyaaf biyyoonni Awurooppaa hedduun dura sabboonummaatti fayyadamanii erga of bilisoomsanii booddee (ykn warri duraanuu walabummaa qabu) yeroo dantaa diinagdee isaanii gara Ameerikaa Kibbaa, Afrikaafi Eeshiyaa babal'ifachuu barbaadan sabboonummaatti fayyadaman. Fakkeenyaaf loltuun biyyoota san koloneeffatuuf ergan ' dantaa biyya abbaa keetiitifi ummata keetiif wareegami’ jedhamee amansiifameeti ergamaa ture. Barsiisaanis ta'ii bulchaan ergamus qaroomina biyya keetii addunyaa waliin gahi jedhameeti ( civilizing mission). Numa birattuu loltuun Tigree sabboonummaan guutamee biyya isaa erga bilisoomsee booda, Oromiyaa dhufee kan du'aa tureefis dantaa saba kiyyaan eegsisa jedheetumaa beekaa. Biyyoota Lixaatti Impeeriyaalizimiin waraanaa faashinni dabree kan aadaa ( cultural imperialism) yeroo bakka bu'us ideology isaa ammas sabboonummaadha. BBC'n sabboonummaa Britain oofa, Hoolywood kan Ameerikaa. Fakkeenyaaf BBC World kan sabbonummaa biyyootaafi saba biraa qeeqaa oolu, waluma cinatti aadaa, seenaa, qaroomina aadaa isaanii akkasumas jabina waraana isaanii faarsaa oolu. Holywood ammoo ol’aantummaa Ameerikaa addunyaa addunyaa irratti jaare. Addunyaa irratti aadaan ASmeerikaa sammuu dargaggota addunyaa akka koloneeffatu dandeessise. Bu’urri ( core) BBC ta’ee Hollywood sabbonummaa biyyoota isaaniiti.
Qabxiin ani kaasuu barbaade, warri amma Oromoon bilisoomtee Itoophiyaa bulchuutu nuun mala jedhaniifis sabboonummaan Oromoo faaydaa malee miidhaa hin qabu. Inumaatuu ummata isaanii ( core constituency) yoo sabboonummaadhaan cimsanii of duuba hiriirsan malee Itoophiyaa gubbatti aangoo sabatiinsa ( sustainable) qabu dhuunfatanii turuun hin danda'amu. Sirna federaalaa keessatti Oromiyaan haqa ishiin maltu akka argattu yoo kan feenu ta’es ummata Oromoon tokkummaa isaa cimsate qabaachuun dirqama. Sabboonummaa cimaa malee tokkummaan jabaan hin jiraatu. Warri sadarkaa gaanfa Afrikaa takkaahuu ardii san guututti Oromoo olbaasuu hawwaniifis sabboonummaan humna ta’aaf. Dantaa diinagdee saba keenyaa daangaa biyyattiitii alatti dagaagsuufis sabboonummaan bu'uura milkaa'inaati.
Kana yoon jedhu sabboonummaan itti biyya bilisoomsanii, sirna siyaasaafi diinaggee gaarii utubanii, san booda dantaa itti babal'ifatan akki itti dhiheeffamu tokko jechuu miti. Hamma tokko jijjiiruu ( modify) barbaachisa. Jijjiiramni godhamu garuu sabboonummaa adeemsa qabsoo bilisummaa (resistance politics) keessatti itti fayyadaman xiqqeessuufi busheessuun osoo hin himata ( narrative) haaraya itti dabaluudhaani. Sabboonummaa gaafa qabsoo itti fayyadamne busheessuu, faalleessuufi xiqqeessuun sabboonummaa bulkchiinsaatifi dantaa babal'ifannaatiif fayyadamuu barbaannu bu’uura irraa ka’u dhoowwata. Kana jechuun har’a Oromiyaa dhuunfachuu bira dabarree Itoophiyaa bulchuu qabna yoo jedhames, sabbonummaa asiin nu geesse faallessuun, humna nu buusee lama nu dhabsiisa. Oromiyaas Itoophiyaas. Akkuma biddeenni har’a tolchinu raacitii isa kaleessaatin alatti tole jedhee bukaayee yoo olchinu ija hin baafne, sabboonummaa Oromiyaa ittin jaarre gatnee, Itoophiyaa mirgiifi dantaan Oromoo keessatti eeggamu jaaruun waan hin danda’amneedha.
Wanniin nama keenya akeekkachiisuu barbaadu qeeqa sabboonummaa irratti hayyoonnifi hogganoonni siyaasaa biyya keenyaafi gama Lixaa dhiheessan yeroo mara dantaa isaanii tarkaanfachiisuuf kan akeekeedha. Fakkeenyaaf yeroo tokko Itoophiyaadhaa ‘constitutional patriotism’ kan hayyichi beekkamaan Jurgon Habermas jedhamu barreessitu ta’e yaadni jedhu qabsoo Oromoo keessaan biqilee ture. Yaadni sun fagoorraa yoo laaltu nama hawwata. Yoo itti dhihaattee hayyuun kun dantaa eenyuu tarkaanfachiisuuf yaada san dhiheesse, miidiyaaleen Lixaas maalif dhaadheessan yoo jettee gaafatte waa heddu agarta. Hawaasa ( constituency) namni sun keessaa baheefi fayyadu barbaadu beekuu qabna. Sadarkaan siyaasaa hawaasa isaa eeysa geesse? Ammas tanuma qabsoo ( resistance) keessa jirti moo gara bulchiinsaafi babal’ifannaa ceete? Waa’ee sabboonummaan orma biraa yoo qeequ kan saba ofii hoo maalif irra dabre? Sabboonummaan saba isaatiif biyya jaartee misoomsite ummata biraatif akkamiin hamtuu jedhamte? Haaluma kanaan kaleessa pirazidantiin Faransaay haasaa Kongrasii Ameerikaatti godheen sabbonummaa hedduu balaaleffate. Dhugaan garuu yeroo sabboonummaa biyyoota biraa balaaleffatu kanatti biyya isaa keessatti imaammata sabboonummaa Faransaay finiinsan dalaga. Fakkeenyaaf aadaa Faransaayitu faalama jechuun aadaafi amantiin baqattootaa akka cunqurfamuufi kan Faransaayiin liqimfamuus imaammata assimiliation jedhamu hordofa.
Hubadhaa, sabboonummaan gonkumaa rakkoo hin qabu jechuu miti. Sabboonummaan qabsoo bilisummaatis ta’ee bulchiinsaafi dantaa babal’ifannaa armaan olitti dhihaate yoo itti gaafatamummaadhaafi tarsiimoon hin maskamne miidhaa qabaata. Saboota oollaatiin walitti bu’uu, walwaraansa uumuu fi kkf karaa saaquu mala. Kana ammoo ideology hundatu qaba. Fakkeenyaaf soshaalizimiin walqixxummaan haqaa lammiilee biyya tokkoo jidduutti akka uumamu fayyada. Yoo bifa madaalawaan deemamuu baate ammoo nama hunda wal qixxeessuu dhiisee hunda isaa hiyyoomsa. Kaapitalizimiin waldorgommii cimaa lammiileefi kubbaaniyyaalee jidduutti uumuudhaan diinagdee saffisaan guddisuufi qaroomina teeknolojii saffisiisuuf shoora guddaa taphate. Heeraafi seera gabaa bilisaatin maskamee ( regulated) deemuu baannaan garuu biyya gartuun muraasni duroominaan quufanii haqqisan, kan ummanni wayyabaa hiyyummaa keessatti hafu godha.
Kanaafuu sabboonummaas sirnaan itti fayyadamuun faaydaa isaa guddisaa badii fiduu malu hambisuun ni danda’ama. Sabboonummaan Oromoo ammoo hundeen isaa sirna Gadaa kan bu’uurri finna, nagaafi walqixxummaa ta’e irraa waan dhufeef amaloota sabboonummaa badaa ta’an hin muldhisu. Fakkeenyaaf waggoota afran qabsoon itti finiine kana keessatti silaa akka olola diinni oofutiifi sodaa hayyootuma keenyaatiinuu Oromoon saboota biraan walitti bu’ee wal fixa ture. Amma wanni qabatamaan agarre, saboota biroo dhiisi sabni Tigree kan jeneraalonni isaanii nu fixaa jiranuu hin tuqamne. Lolli daangaatis yoo taate weera jeneraalonni Wayyaanee harka Abdi Illeetin Oromiyaatti banan malee kan sabboonummaan Oromoo saba ollaa isaatin walitti buusee miti. Sabboonummaan Oromoo amaloota ( characteristics) hamaaf saaxilan badaa hin qabu. Akka hin uumamneef ammoo tarsiimoon maskamuudhaan dhoorkuu malee sabboonummaa dimshaashaan busheessutti deemuun fala miti.
Dhumarratti obboleeyyan keenya kan gaafiin Oromoo biyyuma Itoophiyaa sirreessudhaan deebi’a jedhanii abdatan, sabboonummaan Oromoo dagaaguun walabummaa Oromiyaatti geessa jedhanii akka sodaatan nan hubadha. Itoophiyaa Oromoof taatu jaaruuf jecha sabboonummaa Oromoo ukkaamsuufi busheessuuf yaaluun walabummaa Oromiyaa yoo saffisaan dhalche malee hin hanqisu. Sabboonummaan malaan qabame akka galaanaa lola’ee ooyruu obaasa. Ukkamsamnaan garuu bishaan sun kuurii cabsee dhoo’uun karaa abbaan ooyruu hin barbaadinitti dhangala’uu qofa osoo hin taane ooyruu dhiqee balleessuu mala. Kanaafuu fedhima Itoophiyaa saba hundaaf walqixa taate uumuuf qabdanuu argachuuf sabboonummaa tooftaaan kunuunsaa deemutu wayya. Itoophiyaa haaraya jaaruf Oromummaas ta’ee sabboonummaa booddeessuun hin barbaachisu. Namni Oromoo Itoophiyaaf yaalu fala Oromummaafi Itoophiyummaa ittiin wal fudhachiisee deemuun ummachuu qaba malee sabbonummaa Oromoo tuqnaan ni kasaara.
Yaa Oromoo, akkuman amma dura jedhe sabboonummaan ammatti gaaza qabsoo teenyaati. Gaafa bilisoomne ammoo xaa’oo misooma Oromiyaati. Kunuunfadhaa, guddifadhaa, tarsiimoon itti fayyadamaa!
Posted by Hasan Ismail at 4:25 PM No comments:
Hoggansi OPDO maalif LYM kaasuu hin barbaanne?
LYM ni kaasan jennee osoo abdannuu torban dabre keessa walgahii Adaamaafi bakkoot biraatti godhame irratti barbaachisummaa labsii kanaatu dabballootatti himamaa ture. Hoggansi ol'aanaan OPDO durumarraa labsii kana paartilee EPRDF biroo waliin guututti deeggaruu isaa ni yaadatama. Kanarraa ka'uun jarri kun LYM kana tursuuf fedhii akka qaban jala murree dubbachuu dandeenya. Sababani isaanii maali laata?
1) Caasaan isaanii jidduugaleessaafi gara gadii takkaahuu tarkaanfii Qeerrootiin barbadaayeera ykn ammoo sirnicha ganee ummatatti makameera. Kanaafuu LYM kanaan humna waraanaatiin fayyadamanii caasaa san deeffatanii jaaruu barbaadan. Kun abshaalummaadha. Nama isaan mormu komaand poosiitti eeran qabsiisuun ukkaamsu. Garagalanii nuu miti komaandi poostiidha jechuun komii jalaa of baasu. Kana jechuun hanga komaandi poostiifi Qeerroon wal atakaaranuu OPDO deebitee of jaaruu feeti.
2) Akeekni OPDOn labsii kana tursuu feetuuf kan lammataa OFC/KFOn akka ummata keessa socho'ee of jaaree jabaatee filannoo itti aanuuf hin qophoofne sakaaluudha. LYM kun paartileen mormitootaa akka walgahii hin yaamne, ummata hin jaarree dhoorga. OPDOn filannoo itti aanuuf qophaayaa jirti. Filannoo dhugaa kan walaba ta'eefi paartiin cimaan isanin dorgomuuf humna horate keessatti ni moo'amna jedhanii sodaatu. Kanaafuu LYM warra gaafa filannoo isaaniin falmuu danda'u sun akka of hin jaarree ugguree laamshessee tursiisa. Guyya filannootiif ji'oonni muraasni yennaa hafu fakkeessuudhaaf akka socho'an hayyamanii moo'achuu fedhu. Hubadhaa, filannoon gandaa, aanaafii namootaa Caffeefi paarlaamaa federaalaa keessaa hirdhatan itti guutanii silaa Caamsaa kana ta'a. Filannoo kanatti ni moo'amna jedhanii waan sodaataniif LYM sababeeffachuun bara dhufutti dabarsan. Gaafa LYM kun ka'utti filannoon sun dhihaatee jira. KFOn keessattu sadarkaa aanaafii gandaatti sirritti of jaaruuf yeroo hin qabaatu. Kun ammoo OPDOn moo'adhe akka jettuuf hiree kennaaf. Yaadadhaa KGG OPDO paartilee mormitootaa biyya jiraniifi kan alaa hunda waliin hojjanna jettee erga ibsa baaftee ji'a 4 ta'aa jira. Hanga ammaa garuu paartii biyya jirus ta'ee kan alaa waliin haasaa sirna tokko akka hin eegalin mirkaneeffadheera. Akkuma KFO amma LYM laamshessitee erga filannoo jala gahamee fakkeessuuf gadi lakkiftuu, warra ala jiraniis filannoof jiini muraasi erga hafee galaa jechuuniif deemu.
Kun waan OPDOn tooftaa OPDOn baafattee ittiin socho'aa jirtuudha. Garuu yaada isaanis ummata keenyas miidhuudha. Paartiin cimaan Oromiyaa keessatti jiraachuun OPDO Wayyaanota biratti gatii dhabsiisa malee hin jabeessu. Kabaja har'a EPRDF keessatti argatte kana kan horatte sababa Qeerroon humna cimaa ta'ee as baheefi. KFO laaffisuun OPDO osoo hin taane TPLF deebitee akka cimtu godha. Akkasumas LYM kaasuun dirree dimokraasii bal'isanii fedhiin ummataa fincila irraa gara paartii ijaarameetiin akka deemu gochuun tasgabbii OPDOn waywaataafii ooltuuf murteessaadha. Dirreen dimokraasii dhiphatee paartileen laamshayanii turraan ummanni ammas sadarkaa hawaasaa ( civic society) tti hoggansa sochii Qeerrootiin qabsoo isaa itti fufuu malee filmaata biraa dhaba. Waliigalatti LYM deeggaruudhaan tarsiimoon OPDOn hordofaa jirtu, dogongoroota MM hojjataa jiruun walitti dabalamee, kan ishiifi ummata Oromoo bifa haaraan walitti buusee, Wayyaanetti lubbuu horuudha. waan kana ta'eef hoggansi OPDO ofii jedhee qalbii horachuun LYM safisaan akka kaasu gorsina.
Posted by Hasan Ismail at 7:23 AM No comments:
Haasaan Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad dhimma sabboonummaa Oromoo irratti kaase waan laaftutti laallee bira dabarru miti. Dogongora jechaas miti. Amma duras haasaya sabboonummaa Oromoo xiqqeessan haasayaa ture…irra dabarreef malee. Sabbonummaan ( nationalism) Oromoo ni miidhe moo ni fayyade waan jedhu garuu gadi buunee irra deebinee mari’achuun akka barbaachisaa ta’a agarra. Kanaafu armaan gaditti waan jedha.
1. Sabboonummaan maali? Gabaabatti aadaa seenaafi eenyummaa saba ofiitin boonu, akkasumas aadaa, seenaa, eenyummaafi mirga saba sanaa miidhaa irraa eeguuf quuqamuudha. Sabbonummaan Oromos kanuma.
2. Ummanni cunqurfame tokko roorroo jalaa bahuuf waliin qabsaa’uun ( collective action) murteessaadha. Kan gitaan ( class) cunqurfame gitaan jaaramee falma ( class struggle). Fakkeenyaaf waldaa hojjattootaa. Kan koorniyaan ( gender) conqurfame akkasuma. Warri sabaan roorrifames sabaan gurmaa’a. Cunqursaa sabaa jalaa bahuuf sabaan gurmaa’uun dirqiidha. Sabaan gurmaa’uuf ammoo sabboonummaa ijaaruufi cimsuun dirmaqa. kanaafiidha sabboonummaan gaaza qabsooti kan jennuuf.
3."Sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessitee gandatti deebifte" jedhe Abiy. Kun madaallii dogongoraati. Sabbonummaan Oromoo ganda keessaa baafte malee gandatti hin deebifne. Sabbonummaan Oromoo baroota 1960moota keessa jaaramuun duratti diinni Oromoo ganda gandatti qoodee wal wallaalchisee ture. Har’a daangaa daangatti akka sabaatti walbeekuu bira dabarree kan waliif hadoodnuufi diinnarratti bakka takkaa kaanuuf sababa sabbonummaan cimeefi. Sabboonummaa jechuun ummanni bal’aan tokko osoo ollummaa lafaatifi fira foonii hin ta’in, sadarkaa sammuutti nuti tokko jedhee socho’uu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo diinni malkaafi gaaraan qoode tokko godhee, waloon qabsaa’anii salphina keessaa bahanii kabajaa har’aa kana akka goonfatan godhe. Sabbonummaan Oromoo hin xiqqeessine, ni guddise. Gandatti hin deebifne humna itti horeet addunyaatti beeksise.
4. Sabbonummaan rakkoo hin qabu jechuu miti. Sabboonummaa akka humna nuukulaaraatti fudhannee laaluu dandeenya. Humni nuukulaaraa yoo dhooye dhumaatii guddaa akka fidu beekkamaadha. Kanaaf sodaatamas. Gara biraan ammoo nuuklaarri madda annisaa ( source of energy) guddaadha. Humna ittisaa ( defense) biyya tokkoo isaa amansiisaadhas. Maarree balaa nuuklaarri yoo tasa dhoohe uumuu malu sodaatanii Ameerikaan faan ummata isaanii ibsaa dhoorkanii dukkana keessa jiraachisaa jiruu? Ni dhooyaaf sodaatanii qawweee nuuklaaraa hiikkatanii? Lakki. Balaa akka hin uumneef of eeggannoo cimaa gochaa irraa fayyadamaa jiru. Nus sabboonummaa miidhaa inni fiduu malu irraa eeggachaa itti fayyadamaa deemna malee busheessinee of kasaarsuu hin qabnu.
5. Siyaasaa Oromoo keessatti Itoophiyaa tana jijjirree saba biraa waliin jiraachuu wayya moo biyya walabaa dhaabbachuu nuuf wayya yaadni jedhu dhalootuma qabsoo tanaa waliin dhufee as gahe. Garuu karaa lachuunuu bakka gahuuf sabbonummaa Oromoo cimsuu malee busheessuun hin fayyadu. Akkuma amma dura jechaa turreefi amma argaa jirru Itoophiyaa dimokraatessu kan danda’u ummata Oromooti. Ummanni Oromoo kana gochuuf ammoo akka sabaatti jabaa ta’ee gurmaa’ee siyaasaa biyyattii dhuunfachuu qaba. Gurmuu akkasiitiif ammoo sabbonummaa malee wanti humna kennuuf hin jiru. Haaluma kanaan Oromiyaa walabaa jaaruuf yoo deemnes sabbonummaa malee gaazni biraa hin jiru. Kanaafuu Itoophiyaa Oromoofi saba biraatiif taatu jaaruuf sabboonummaa Oromoo xureessuu osoo hin taane daranuu cimsuun humna horachuu malee busheessuun akeekuma sanuu hanqisa.
6. Muumichi Ministeeraa Itoophiyaa tokko taate namni itti waliif galee jiraatu jaaruu akka barbaadu dubbata. Kana gochuuf ammoo sabbonummaan Oromoo akkuma taaytaatti isa baafte amma boodas humna itti hortee akeeka isaa galmaan gahuuf gargaarti malee hin gufachiiftu. Sabbonummaan Oromoo Itoophiyaa haaraya sabaafi sablammiin walqixxummaafi jaalalaaan keessa jiraatan uumuuf humna guddaadha malee balaa miti. Itoophiyaan sabboonummaa Oromoo hin fudhanneefi hin hammenne dimokraatawuu dhiisaatii akka biyyaattuu ittin fufuu hin dandeessu. Sabboonummaan Oromoo bakka ukkaamsan bira dabree jira, ukkamsuuf yaaluun dhoohinsa guddaa uuma.
7. Warri ummata Oromoo cunqursaa Oromiyaa saamuu fedhan gaafuma sabboonummaan Oromoo dagaaguu eegalerraa olola jibbaa oofaa turan. Yeroo tokko fottoqxuu ( secessionist) yeroo kaan dhiphoo jechuun kolaasuuf yaalaa turan. Sabboonummaan Oromoo garuu olola isaanii baruma baraan cabsaa kunoo har’a harka kennisiiftee jirti. Warri sabboonummaa Oromoo xiqqeessaa ture bu’aa argame hubachuudhaan har’a sabbonummaa saba ofii jaaraa jira. Yeroo injifannoo akkanaa keessatti nama qabsoon tun olbaafteefi dhaaba Oromoo hogganu irraa ilaalcha farra sabboonummaa Oromoo dhagayuun hedduu kanaaf nama gaddisiisa.
8. Sabbonummaa Oromoo xureessuun dhaabas ta’ee nama siyaasaa Oromoo keessatti milkaayuu barbaaduuf balaa hamaadha. Dhaaba siyaasaa Oromoo hogganaa sabboonummaa Oromoo tuquun akka awutoobuusii yaabbatanii deemuu barbaadan takka taankara gaazaa ishii uruuf yaaluuti. Uruufis hin milkooftu. Imaltoonni kaan sitti hin dhiisan. Yoo milkooftee urte ammoo konkolaataan sun gaazni waan jiguuf fagoo hin deemu.
9. Lammaa Magarsaa OPDO ummanni xireeffatu akka hiree ammaa kana argattu gochuu kan danda’e sabbonummaa Oromoo ofitti fudhatee humna waan godhateefi. OPDOn akkuma dur ‘ dhiphummaa’ jechaa turte sabbonummaa Oromoo xureessutti yoo deebite halkan tokkotti sabaan xireeffamti. Ofii jedhii mi’aayi!!
10. Muumichi Ministeeraa dhugaadha Itoophiyaa guutuu hoggana; saba cufa walqixa tajaajila. Garuu siyaasaa keessatti milkaayuuf hundee ofii jabeeffachuu malee muufachiisuun kasaaraa guddaa qaba ( never loose your base) Itoophiyaa bulchuuf of ta'uu dhiisuun hin barbaachisu. Inumaatuu sabbonummaafi Oromummaa cimaa qabatanii dhaquutu biyya saniifi faaydaa qaba. Ilaalchonni warra kaanii yaalamanii kufanii jiran. Amma dabareen kan Oromummaan yaaluuti.
11. Ilaalchi Abiy kan isaa qofa natti hin fakkaatu. Waanuma akka jaarmaayyi dhiibaa jirantu muldhata. OPDO fi EPRDF dhaabbilee sabummaa irratti jaaramanirraa gara biraatti cehuuf akka yaalaa jiran ni beekna. Kora Hagayya dhufu taa'amurratti EPRDF adda ta’uu irraa gara paartii jijjiramuuf ( from front to party) akka karoorfate Shifarraa Shugguxee dhiheenya kana dubbatee jira. San dura Sibahaat Naggas dubbachaa ture. Ibsa ejjannoo Koreen Jiddu Galeessaa OPDO baase keessattis wanti kun calaqiisee jira. Itoophiyaa keessa cunqursaa gitaa ( class exploitation) malee kan sabaa hin jiru waan jedhu kaayan. Kuni soba qofa osoo hin taane tarsiimoo siyaasaa dogongoraati. Itoophiyaa keessa cunqursaafi loogin sabaa kaleessas ture har’as hammatee itti fufee jira. Hin dogongorinaa! Gara fuulduras sirnuma dimokraatawaa keessattuu siyaasaa biyya akka Itoophiyaa sabummaa irratti kan hundaaye ta’eeti itti fufa. Wayyaaneen yaada kana kan ooftuuf warra ishii waan sirritti diinaggeen humna itti jaarteefi jirtuuf of dhoksuufi. Sabni keenya garuu walqixxummaa fiduuf har'a qofa osoo hin taane borus itti qabsoo itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo sabboonummaa isaa laaffisuu osoo hin taane daran cimsachaa deemuun barbaachisaadha.
12. Tooftaa qabsoo amma godhamaa jiru keessa tokko OPDO wayyaanee jalaa bilisoomsuun meeshaa qabsootti jijjiiruudha. Hojii tooftaan tun gaafattu keessaa tokko OPDO keessaa jallaa dhabamsiisuu takka jallisuun, kan jabaa ammoo ajjabeessuudha. Kun caasaa isaanii jalaa hamma gubbaatti itti fufa. Kanaafuu warreen jechaafi gochaanis qabsoo Oromoo faalleessan irratti qabsaa'uun cimee itti fufuu qaba.
13. Muumichi Ministeeraa kun wanti Baahir Daaritti haasaye akka waan dogongora arrabaa ta’eetti warri fudhatan jiru. Miti. Ilaalchuma isaatu sani. Waan kana akeeku akka hudeddutti dubbataa ture. Ilaalchi dogongoraa kan isas saba kanas miidhu waan ta’eef sirreeffachuu qaba! Alagaa gammachiisanii firoomfachuuf saba ofii muufachiisuun kasaaraa siyaasaa qaba. Alagaan hamma fedhe har'a harka siif dhawu bor xiqqoma muufachiifnaan sitti garagala. Kana ammoo torbaanuma dabres agarree jirra. Tarsiimoon sirri saba ofii jabeeffachaa kunuunsaa ormas kabajaan itti dhihaachuudha. Yoo constituency kee jabeeffatte orma birattis kabjaa dhugaafi yeroo dheeraa argatta. Mummichi ministeeraa saboota biyyatti walitti dhiheessuuf akka yaalu naaf gala. Garuu ammoo sabbonummaa Oromoo busheessuufi warra kalee ummata keenya lafarraa duguugaa ture faarsuun tokkummaa inni yaadu san hin fidu; daranuu madaa dur tuttuqee ummata walitti buusa
14. Akkuma Lammaan jedhe sabboonummaan Oromoo nuuf bu’ura waa hundaati. Motora sochii cufaati. Ummanni keenya humna waraanaa hin qabu. Fira biyya alaa hin qabu. Oromoon waluma qaba. Of ta’ee akka sabaatti galma ga’uuf ammoo sabboonummaa isa barbaachisa. Aggaammiin sabboonummaa isaa irratti godhamtu aggaammii saba kana laaffisuufi diiguuf xiyyeeffatteedha. Ofirraa haleeluu qaba. Wanni fedhes dhufu Oromoon sabboonummaa isaa gonkumaa laaffisuu hin qabnu.
15. Dhumnarratti Muummichi Ministeeraa kun akka alaa faarfamu kana osoo hin taane mudaa hedduu qaba. ( mudaalee san tarreessuu hin fedhu; jaallan isaa ni beekan garii ammoo duruu mumul'achuu eegalan). Mudaan isaa sun saba keenyaafi biyya san akka hin miine dammaqinaan hordofuu; warri itti dhiyaattan dhugaadhaan gorsuu, nuti warri irraa fagoo ammoo cimsinee qeequun barbaachisaadha. Warri itti dhiyaatu osoo beekanii caldhisanii faarsinaan, nuti warri fagoos mirqaana yeroo cabsuu diddaaf afaan qabannaan walfudhannee qilee dhaqna.
Waliigalatti maddi humna qabsoo Oromoo tokkicha. Sunis tokkummaa isaati. Hapheen tokkummaa kanaafi gaazni isa oofu ammoo sabboonummaadha. Kanaafuu namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu akkuma jedhan, Oromoonis warra sabboonummaa isaa laaffisuu fedhan cimsee dura dhaabbachuun fashalsuu qaba.
Posted by Hasan Ismail at 2:28 AM No comments:
Eeyyeen seenaa Jallisuun sirrii miti. Garuu akkuma bitaatti jallisuun hin taane mirgatti dabsuun hin bareechu
Eeyyeen seenaa Jallisuun sirrii miti. Garuu akkuma bitaatti jallisuun hin taane mirgatti dabsuun hin bareechu. Qubeen Afaan Oromoo yeroo ammaa itti hojjannu tun bu'aa xaarii hayyoota Oromoo lamaati; Sheek Mohammed Rashaad Abdullee fi Haylee Fidaati. ( Sheek Bakri hojii jara lachuutiifuu hangafa qubeen inni dalage garuu tanaa miti). Jarri lamaan kun mata matatti qubeefi seerluga Oromoo qorachuufi qopheessuu qofa osoo hin taane fudhatama akka argattuufis shoora guddaa godhan. Hayleen biyya Jarmanitti Sheek Mohammadrashaad ammoo Soomaaliyaatti qo'annoo yeroo dheeraa godhanii osoo quba wal hin qabaanne qubeen Laatin Afaan oromoof mijooytuu akka taate irra gahanii seera itti baasan. Sheekni qubeefi seera isii kitaaba Fura Afaan Oromoo jedhuun qopheesse. Hayleen ammoo Hirbaata Dubbii Afaan Oromoo jedhee dhiheesse. namoonni tokko tokko akka waan jarri lamaan kun waliin hojjatee takkaahuu walirraa garagalcheetti haasayu. Soba. Hayyonni kun wal hin beekan ture, hariiroofi qunnamtiis qabaachaa hin turre. ( Kan Sheekni afaaniin naaf hime, Hayleen ammoo gara diary isaatiin naaf mirkaneesse)
Jarri lachuu carraaqqii kana keessatti Oromootaafii alagaa irraa mormii cimaatu irra gahaa ture. Kitaabni Sheekni qopheesse erga maxxanfamee booda akka ugguramee gubatu godhame. Hayleen biyya Faransaay irraa ari'amee Jarmaniitti qu'annaa isaa xumure. San booda dhoysaan kitaaba san Finfinneetti erge. Luba Guddinaa Tumsaatti erge ( namni kitaaba san Finfinnee fide nyaapha ammas ni jira). Lubni Baaroo Tumsaatti i kenne. Sheek Mohammadrashaad hiree lammataa argatee bara 1976 maxxansiise.
Sirni qubee hayyoota lamaanituu gaafasitti hanqina qaba ture.( hanqina jiru barruu Dr Abdulsamad irraa ni hubattu) Kanaafuu Addis Bilisummaa Oromoo (ABO) kitaabota lamaan kana walitti cuunfee qubee har'a ittiin barreessinu tana qopheessee lafa jala ummata barsiisuu turan. Sanumatu bara 1991 ifa bahee heeraan hojiirra oole.
Hayyoonnji lamaan kun qubeefi seera ishii qorachuufi qopheessuu qofa osoo hin taane akka fudhatama argattuuf falmaa cimaa geggeessanii wareegama qaalis kafalan. Jarri lachuu afaan beekan hedduudhaan Afaan Oromoo Qubee laatiniin barreeffamuun maalif akka filatamaa ta'e ragaa waliin barreessuun falmaa turan.Hayleen Afaan Amaaraafi Ingiliziin barruu heddu barreessee maxxansiisaa ture. Sheekni Afaan Arabaafi Oromoon akkasuma barreessaa turan. Kanaafis diina heddu manaafi alaa itti kaasee jiruu isaanii gaaga'aa ture. Wanni biraa hubatamuu qabu gumaachi hayyota lamaan kana Afaan Oromoo qofarratti miti. Lameenuu siyaasaa qabsoo Oromoo keessatti warra adda durummaan hirmaataa turee, kan Oromummaa isaaniitiif waan falmaniif gaaga'ama heddu dhandhameedha. ( yoo rabbi jedhe gaafa biraa ittin deebi'a tanatti)
Wannin armaaan olitti isiniif katabe kana kaniin sirritti qorannaan beekuudha. Sheek Mohammadrashaad, rabbi itti haa araaramuu, gaafa lubbuun jiru waggoota jahaa oliifin waliin haasawaa turre. Hanga gaafa gara fuula rabbii deemuttis wal quba qabaachaa turre. Seenaa tana takka takkaan naaf hime. Haylee Fidaa nu duratti diinni galaafatus, barrulee inni barreesseefi dabtara yaadannoo isaa ( personal diary) dabalatee galmee hedduun harkaa qaba. Warra isa beekuus hedduun interview godhee harkaa qaba.
Qorannoon tun hayyoota lamaan kanaa, gumaachaafi ilaalcha isaanii sirritti akkan hubadhu waan na gargaaree tureef seenaa keessatti qoodni isaaniin malu dhoorkamuun isaanii na gaddisee akka beekkamuuf hedduun carraaqe. Dhugaa yoo dubbanne qabsaa'otaafi hayyoota qabsoo tanaaf bu'aa guddaa buusanii galanni dhoowwame keessa jarri lamaan kun adda dureedha. Kun ammoo sababa qaba...amma san itti hin seenu. Deebi'anii beekkamuu ( rehabilitation ) seenaa hayyoota kanaatif anaafi namoonni hangi tokko waliin dalagaa turre shoora qabna yoonin jedhe if dhaadu hin taatuun se'a. Miidiyaaleen haqa jara kanaa akka dubbataniifi haasawa ( narrative) sirrii akka dhiheessaniif duubaan waan heddu godhaa turre. Gariis itti milkooyne taanis guyyaa eeggatti.
Wanni yeroo hunda na gaddisiisu tokko qorannoon shoora hayyoota lamaan kanaa irratti godhe kitaabatti jijjiree dhiheessuuf hojiin eegale jiddutti dhaabbachuu isaati. Akkuma beeytan waggoota 4n tana ta biraatitu harkaa nu qaba. Pirojaktiin dhimma hayyoota lamaaniitifi kanneen biroos akkasumatti dhaabbatanii qaqaa dhugaa jiran. Yoo rabbi na gargaare waan amma itti jirru tana faaga achi baafnee qorannoo jiddutti dhaabne kanatti deebina jedheetin abdadha.
Hammasiifuu seenaa teenya tana mee waan beeytan hundinuu numa barreessaa. Yoo jalliftaniifi dogongortanis humaa miti. Kan isinirra beeku qajeelchee kaaya. Rakkoon Oromoon qabdu seenaan jallattee barraayuu qofaa miti. Inumaatuu hin barrooyne. Seenaa Oromoofi ilmaan Oromoo dalagan keessaa 1% hin barrooyne miidiyaanis hin dhiyaanne. Kanaaf namni laaftutti atakaarotti ceha. Kanaafuu waan beektan akkuma isiniiif mijaayetti barreessaa maxxansaa.
Posted by Hasan Ismail at 7:14 PM No comments:
JAWAAR MAHAAMMAD ILAALCHISEE.
Akkuma beekamu Lagannaan Gabaa marsaa duraa akka guutuu Oromiyaatti guyyoota 3f labsame galgala kana xumurama. Kaayyoo guddaan lagannaa kanaa, Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) paarlaamaa biyyattiin utuu hin ragga'iin wayyaaneen seeraan ala labse balaaleffachuu fi mormuu ture. Kunis bifa milkaa'aan geggeeffameera jechuun ni
danda'ama. Uummanni Oromoo olii hanga gadiitti (Bakka Bu'oota Uummataa hanga nama dhuunfaatti) sagalee tokkoon labsii kana mormee jira. Egaa, lagannaan guyyoota 3 kun addatti labsii kanaaf waamamus, Oromoon akkuma duraan mormaa ture hanga mootummaan abbaa irree kun biyya isaaf dhiisutti falmachuu ittuma fufa.
Qabsoon keenya kana boodaa ammoo dhimmoota murtaa'anirratti qofa utuu hin ta'iin, siyaasa biyyattii sirna amma biyya bitaa jiruun borcame kana sirreessuutti kan fuulleffate ta'uu qaba. Wal-dhaggeeffannaan, waliin hiriirraan, wal-eegaa tarkaanfannaan, kun hunduu ni danda'ama. Oromoon ammoo shakkii malee kana ni godha. Yoo nuti wal-
harcaasaa adeemne garuu lafti yaadame hin ga'amu. Kanaaf har'as, boris tokkummaan riqicha keenya isa guddaa dha. Isa malee gara bilisummaatti cehuu hin dandeenyu.
Waa'ee Jawaar Mahaammad ilaalchisee akka dhuunfaa kootti wantin jechuu barbaadu tokko jira. Akkuma hundi keenyayyuu beeknu namni kun aktivistii qofa utuu hin ta'iin, hayyuu siyaasaatillee. Siyaasni ammoo hirmaattota (taatota) hedduu hirmaachisa. Qabsoo Oromoon sirna gabroomfataa wayyaanee
kuffisuuf godhe keessatti qabsaa'ota sadarkaa hoggansa qabsootti shoora hin dagatamne taphatan keessaa tokko Jawaari.
Oromoon Jawaar isa Ameerikaa tokko qofa qaba miti; biyya keessaas Jawaarota hedduu guddifateera. Waa'ee isa Ameerikaa jiraatu kanaa ilaalchota adda addaatu jiru. Garaagarummaan ilaalchaa kun ammoo kaaniin isa jaalachiisee, kaanii isa balaaleffachiise. Otuma Oromoof dhugaan quuqamuu ilaalchaa fi tarsiimoodhaan adda ta'ee namni Jawaariin jibbu jira. Namni lafumaa ka'ee isa hammeessuu fi balaaleffatus hin dhabamu. Inni kun inaaffaa dha malee sabaaf quuqamuu natti hin fakkaatu. Kanaaf siyaasa keessatti waa lamaaf wal jibbina ykn balaaleffanna jechuu dha. Tokko, ilaalchaan adda ta'uudhaan; lammaffaa ammoo itti inaafuu dhaan. Oromoon gareewwan kana lameenuu manaa qaba.
Garaagarummaan ilaalchaa illee jibba
hammaataa hin fidu; inaaffaan garuu balaafamaa dha. Akka nama dhuunfaatti, ani, namoota Jawaariin jaallatanii fi tarsiimoo isaa duukaa bu'an keessaa tokko. Wanti nama kana na jaallachiisu guddaan hoggansa inni qabsoo Oromoof kennu dha malee, amantaa, gandummaa ykn hiriyyummaa miti. Hoggansa isaa nan jaalladha; tarsiimoo isaas nan hordofa. Akka hogganaa qabsootti yoon ilaaleen iyyuu garuu yaada dhuunfaa koo isaaf kennuurraa of hin qusadhu. Yaada ani kennuuf yeroo tokko tokko akkuma jirutti fudhata; yeroo biraammoo guutummaatti na jalaa kuffisa. Yeroo inni yaada koo guutummaatti naaf fudhatu nan gammada; yeroo inni na jalaa kuffisu ammoo gammaduus yoon baadhe maaliif akka inni na jalaa kuffise gaafadhee, ofii kiyyas itti yaadeen sirreeffadha. Otuma yaanni isaa gonkumaa na hin amansiisne ta'eellee isa mormuuf hin akeeku. Tarii isa kan kootu irra bareedaa dha ta'uu danda'a; garuu uummata qabsoofnuufilaalcha keessa yoon galchu, mormuu fi yaada faallaa qabadhee dhufuu irra, yaada koo isa kansaatti sirreeffachuu akka wayyun amana. Ana caala isatu Oromoof bu'aa fida jedheen of amansiisa. Kanaaf isa danquun Oromoo danquu ta'ee natti argama. Namni hundi utuu akka kana godhee ba'eessa ta'uu hin hafu. Of keenya bu'uureffachuun gaarii miti. Bu'uurri keenya addatti saba bal'aa Oromoo, akka waliigalaatti ammoo uummata Itoophiyaati. Aangoon, kabajnii fi bu'aan nama dhuunfaa akkuma jedhame sana bool'a haa seenu, nuyi
uummata keenyaaf dursa laanna. Walii keenya dorgomnas utuu hin ta'iin, warra humnaan nuituu yaalan morkanna. Manaa wal dorgomaa ammoo alaa hin mo'annu. Oromoon
hoggantoota qabsoo fi qabsaa'ota hedduu horatee qaba jenneerra. Keessaas haa ta'u alaa, nama dhugaan qabsoo Oromoo hogganu duukaa hiriirree bilisummaa gonfachuutu nuuf ta'a. Walumaagala, Jawaar kun qabsoo Oromootiif nama baay'ee murteessaa waan ta'eef, isa waliin hiriirree qabsoo kana haa
milkeessinuun dhaamsa kooti. Galatoomaa!
Posted by Hasan Ismail at 3:20 PM No comments:
Akkuma addunyaan guutuun argaa jiru, Wayyaaneen labsii muddamaa bu'ura seeraa hin qabne baaftee paarlaamaa ishiittuu salphattee jirti. Labsichi sagalee 2/3ffaa heerri gaafatu waan hin argatiniif kufee jira. Garuu ammas sobarraa soba dabaluun humnaan raaw'achiisuuf wixxifataa jirti. Badii isiitirraa akka deebitu hireen laatamee jira. Haaluma kanaan hanga guyyaa boruu jechuunis Dilbata Gurraandhala 25, 2010 ALH labsiin kun kufuufi kompandi poostiin ka'uu ifatti gara miidiyaatiin ibsa laachuu qaba mootummaan.
Kana ta'uu baannaan ummata dhumaatii irraa, biyya ammoo diiggumsa irraa hambisuun kan danda'amu qabsoo ummataa finiinsuun labsii kana haqsiisuudhaani. Haaluma kanaan duula walitti aanaa gochuuf karoorfamee jira. Duulli marsaa duraa lagannaa gabaafi hojii dhaabuutin Wiixata Gurraandhala 26, 2010 ALH eegala. Haaluma kanaan;
1- Lagannnaan gabaafi hojii dhaabuu guyyaa sadiihiif Wiixataa hamma Roobitti godhama. Kana jechuun manneen daldalaa hundi ni cufamu, waajjirri mootummaa hin banamu, konkolaataan hin socho'u. Kana beekuun konkolaachiftoonnifi imaltoonni deemsa isaanii borutti akka raaw'atan hubachiifna.
2- Daandilee daldalaa gurguddaa keessattuu kan biyya alaa qunnamsiisu kan baaburaa dabalatee ciminaan cufama.
Kanaafuu guyyoota lamaan dhufan ummanni keenya qophii isaa akka xumuratu gorsina. Namoota afaan keenya hin beekneefis hojiin hubachiisuu cimsee haa hojjatamu. Lagannaa kanarratti akkuma amma duraa manneen yaalaatifi ambulaansiin hojii lubbuu baraaruu itti fufu.
1- Qabsoo guutumatti nagaya ta'e kana ukkaamsuuf sirnichi humna fayyadamuu kan eegalu yoo ta'e gara mormii tarkaanfilee ciccimootti kan ceenu ta'a. Kana ammoo adeemsa keessa wal hubachiisaa deemna.
2- Poolisiin Oromiyaa akkuma baratame ummata mirga isaa karaa nagayaatiin falmatu akka kabaju abdii qabna. Ammas ummatatti bu'uun seenaa ofii akka hin xurreessine akeekkachiifna. Ummata cinaa hiriiruun humna danda'uun diina aka irraa ittisu waamicha goonaaf.
3- Labsiin muddamaa kun MNO irraa aangoo fuudhee jira. Kanaafuu MNO lagannaa kana gufachiisuuf ajaja dabarsuufi raaw'achiisuuf mirgas dirqamas hin qabu. Kanaafuu kaabinees ta'u bulchiinsi sadarkaa kamiituu komaand poostii waliin ta'ee duula lagannaafi hojii dhaabuu kana dhaabsisuuf yaaluun yakka guddaadha. Warra hirmaannaa akkasii qaban irratti tarkaanfiin madaalamaan akka fudhatamu beeksisuu feena.
4- Bakka Agaaziin ummata keenya irratti tarkaanfii humnaa fudhattetti ummanni keenya humna qabuufi haala danda'een mirga ofirraa ittisuu akka qabu jala sararuu feena.
5- Xumura duula guyyaa sadihii kanatti aansee tarkaanfii fudhatamuu qabu haalota uumaman ilaalaa wal hubachiifna.
6- Dhaamsa kana warri Finfinnee jirtan saffisaan SMS fi bilbilaan ummata hundaan gahaa.
Posted by Hasan Ismail at 2:30 AM No comments:
February 19, 20018
Freedom is defined as “the power or right to act, speak, or thing as one wants without hindrance or restraints. It is also explained as “absence of subjection to foreign domination or despotic government” or “the state of not being imprisoned or enslaved. It goes on to say, “The power of self-determination attributed to the will; the quality of being independent of fate or necessity.” (Dictionary)
I used the dictionary definition of what freedom means in words, but what does freedom mean to those who had to fight, die, be imprisoned, beaten, raped, or uprooted from their homes? Those who have paid for the price of freedom, freedom means much more than any dictionary could ever put in words. It means a father or a mother who would never come home to their families. It means a broken body rapped and ravaged by the enemy. It means losing years of your life in the darkness of prison and not being able to live out your life and desire. It means a youth who would never live his/her potential, have families or even live to see the change they paid for. It means a young couple would never being able to experience the joy of having a family and love they had for one another.
What does Freedom mean to me? My people? And My land?
We fought for freedom for many generations, with set backs and minor failures and moments of triumphs, we are here now. We are here in a crossroad where it is time to materialize what we have dreamed of for generations. What we have paid for as people collectively. Then I ask you, when did we accept the washed down version of freedom? The kind of freedom that the enemy can still sit on their chairs and speak of reform? There is nothing wrong with reform, if the enemy is gone, if the structure of power is completely dismantled. If we are the sole decision makers of our own destiny? But, we are not.
We have sea of people ready to take over that power structure, we have the youth being the fuel of resistance in Oromia. Where did we go wrong that we are still bargaining with the enemy about who is going to lead us? Who should be free from jail? How can a defeated enemy of the people, jailing, killing, uprooting and rapping our people be still at the negotiating table?
I do not care about who holds what political ideology nor do I endorse one over the other. I am just baffled as to what happened to the demands of the Oromo people? Who is responsible for the Irrecha Massacre? Calanqo massacre? Incarceration of over 30,000 Oromos who protested? 700,000 uprooted from their homes? What about the man created famine that claimed unknown number of lives? What about thousands upon thousands of lives we have lost? Did anyone answer for any of these atrocities? Or are our lives and suffering at all level forgivable offense anytime an entity can wave an item we want us? Most importantly, what happened to the right to freedom, the right to self-rule and the right to our own resources? What does freedom mean to us as people? as a Nation?
Why did we lose these precious lives? Why did we die and still dying? Did many take it to the street of Oromia putting their lives and the lives of their families, so we can have power brokers negotiate left, and right? What is freedom? What does freedom look like?
This is my humble opinion as an Oromo lady. I believe and know freedom is the ability for one to choose freely, whether that is a leader, a way of life or anything else. I understand some will say, we must take what we can to get to where we need to be. However, one must proceed with caution because there might be issues with this line of thinking. We fought for the right to choose and the right to be free, we should not water it down because 11th hour is hard and dark. We can, and We will. Freedom is our way out of the darkness and the clutches of our enemies in all forms.
Posted by Hasan Ismail at 7:39 PM No comments:
Eeyyeen seenaa Jallisuun sirrii miti. Garuu akkuma...